Dibad Baxyo looga soo horjeedo Madaxweyne Abdifatah Siisii oo Masar ka socda. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / World News / Dibad Baxyo looga soo horjeedo Madaxweyne Abdifatah Siisii oo Masar ka socda.
Dibad Baxyo looga soo horjeedo Madaxweyne Abdifatah Siisii oo Masar ka socda.
September 21, 2019 - By: Mohamud Nadif
Qaahira caasimada Dalka Masar waxaa xalay ka bilaabmay dibad baxyo looga soo horjeedo madaxweynaha talada Haya Cabdifataax Siisi, boqolaal qof ayaa isugu soo baxay fagaaraha caanka ah ee Taxriir Square. Ciidamada Booliska Dalka Masar ayaa la sheegay in ay sunta dadka ka ilmaysiisa adeegsadeen si ay u kala cayriyaan dibad baxayaasha.
Shacabka mudaharaadaya ayaa dalbanaya in uu si casilo Madaxweyne Siisi iyagoo ku eedaynaya musuqmaasuq iyo ku tagri fal awoodeed, dibad-baxyo kale ayaa laga soo sheegayaa Magaalooyin kale oo ku yaal Dalka Masar.
2011 ayaa sidaan oo kale Masar waxaa ka bilaabay dibad baxyo balaaran oo looga soo horjeeday madaxweynihii hore ee Dalka Masar Xusni Mubaarak taas oo aakhirkii keentay in xilka laga tuuro, 2013 ayaa sidoo kale af-gambi milateri waxaa xilka looga tuuray madaxweynihii ugu horeeyay oo hab dimuqraadi ah lagu soo doorto Maxamed Mursi kaas oo aakhirkii ku dhintay Xabsiga.
Madaxweynaha talada Haya Cabdifataax Siisii ayaa isagu beeniyay eedaymaha musuqmaasuq ee loo haysto, waxa uuna ku tilmaameyn ” BEEN ”, xaalada dhaqaale ee Masar ayaan wanaagsanayn mudooyinkii danbe.
Ciidamo kasoo goostay Somaliland oo ku biiray Puntland
October 13, 2019 By Mohamud Nadif
Trump oo ku adkeystay go’aankiisii Siiriya
October 13, 2019 By Khalid Yusuf
France oo joojisay hub ay ka iibineysay Turkiga
October 13, 2019 By Hanad Askar